कस्तो होला विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाको... :: सेतोपाटी संवाददाता :: Setopati
कस्तो होला विश्व अर्थतन्त्रमा कोरोनाको प्रभाव?
प्रतीकात्मक चित्र। स्रोतः इकोनोमिक टाइम्स
चीनमा फैलिएको कोरोना भाइरस (कोभिड–१९) को संक्रमणले विश्व अर्थतन्त्रलाई धक्का दिन थालेको छ। विगतमा यस्तै महामारी फैलिँदा वा अरू किसिमका संकट आउँदा विश्व अर्थतन्त्रमा कस्तो प्रभाव परेको थियो?
सन २००३ मा 'सार्स' फैलिँदा चिनियाँ अर्थतन्त्रको वृद्धिदर सुस्त भएको थियो। त्यसलगत्तै अर्को वर्ष त्यहाँको आर्थिक वृद्धिले गति लियो। यसपालि पनि रोग नियन्त्रणमा आएपछि अर्थतन्त्रले त्यति बेलाको जस्तै गति लिनेमा विश्लेषकहरू आशावादी छन्।
कोरोना भाइरसबाट ज्यान जानेको संख्या सार्सको तुलनामा बढी छ। आइतबारसम्म बिरामी संख्या ६० हजार र मृत्यु संख्या १ हजार ६ सय नाघेको छ। हरेक दिन संक्रमित संख्या घट्दो रहेको विश्व स्वास्थ्य संगठनले जनाएको छ।
रोगको प्रकोपले सबैभन्दा बढी असर उपभोग र पर्यटन उद्योगमा परेको छ। यसले व्यावसायिक मनोबलमा ठूलो गिरावट ल्याएको छ।
यसअघिका महामारीबाट विश्व अर्थतन्त्रमा परेको प्रभावबारे थोरै अध्ययन भएका छन्। विश्व बैंकले २००६ मा गरेको एक अध्ययनअनुसार सार्सको महामारीले रेस्टुरेन्ट, हवाई यातायात र सामान्य उपभोग्य वस्तु उत्पादनमा २० प्रतिशत कमी आएको थियो।
विश्व बैंकको त्यही अध्ययन पछ्याउने हो भने कोरोना भाइरसको प्रकोपबाट विश्व अर्थतन्त्र ३ प्रतिशतले खुम्चिने अनुमान छ।
चिनियाँ नयाँ वर्षको सेरोफेरोमा कोरोना भाइरस फैलिएकाले यसको आर्थिक असर व्यापक हुने अनुमान छ। पर्वको सेरोफेरोमा चीनमा खुद्रा व्यापार र यातायात गतिविधिमा ठूलो असर परेको छ। सिनेमा व्यापार लगभग शून्यमा झरेको समाचारहरूमा जनाइएको छ।
विदाको समय भएकाले अन्तर्राष्ट्रिय आपूर्तिमा भने खास असर परेको छैन। चिनियाँ विदाको समयलाई हेरेर विदेशी आयातकर्ताले पहिल्यै आवश्यक वस्तु जोहो गरेकाले ठूलो असर नदेखिएको हो।
प्रकाशित मिति: सोमबार, फागुन ५, २०७६, ०६:३४:००
मारवाडी युवा मञ्चद्वारा प्रहरीलाई पिपिई सहयोग (फोटोफिचर)